Modely iPhone 12 Pro (A2341, A2406, A2407, A2408) - Fitaovana
Ny iPhone 12 Pro dia iray amin'ireo fitaovana premium misy amin'ny internet. Ireo mpampiasa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia afaka mividy ity fitaovana ity mba hampiakatra ny lalao smartphone. Handinika ireo safidy ho an'ny iPhone 12 Pro izahay. Izy io dia fitaovana premium izay nidina teny an-tsena tato ho ato. Misy modely samihafa azo alaina amin'ity smartphone ity. Ireo mpampiasa dia hahazo faritra hafa arakaraka ny toerana misy azy manerantany.Ny iPhone 12 Pro dia tonga amin'ny isa maodely efatra. Matetika, misy kinova telo an'ny iPhone. Apple dia manandrana manavao ny fizotry ny famokarany.
Apple dia mitondra maodely isan-karazany amin'ny fitaovana iOS. Manampy amin'ny fanalefahana ny fizotry ny famokarana izany.Ireo mpampiasa dia afaka mahazo ilay iPhone mitovy amin'ny fampiasa mahazatra any amin'ny faritra hafa. Ny iPhone 12 dia tonga amina modely efatra samy hafa. Zava-dehibe amin'ny fampiasana anao izany ary mila serivisy mahomby. Ireo kinova ireo dia mitovitovy. Ny varotra ny iPhone dia mbola tsy natomboka tamin'ny faritra maro. Ny mpijery dia mandalo eritreritra sy fisafotofotoana be momba ireo maodely. Amin'ity torolàlana ity dia hiresaka momba ny kinova A2341, A2406, A2407, ary A2408 an'ny iPhone 12 Pro izahay.
Topazo maso ireo maodely iPhone 12 hafa:
iPhone 12 vs Mini vs Pro ary Pro Max
Modely iPhone 12 (A2172, A2402, A2403, A2404)
Endri-javatra ny iPhone 12 Pro:
Ny maodely iPhone 12 Pro dia misy fiasa mitovy amin'izany. Andeha hojerentsika izay atolotry ny fitaovana vaovao atolotra an'ireo mpampiasa.
1. Processeur vaovao sy nohatsaraina
Ny Apple A14 Chip dia tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny finday avo lenta. Izy io dia miaraka amin'ny fanohanana ny fiainana bateria vaovao sy nohatsaraina. Io no chip nanometera 5 voalohany indrindra hita ao amin'ny indostria.Apple dia manatsara ny lalao isan-taona. Mampanantena izy ireo a Fampisehoana haingana 50% noho ny chip rehetra misy eny an-tsena.
Afaka manandrana izany ny mpampiasa raha mahita tombontsoa vaovao tena tsara. Manatsara ny fahombiazan'ny horonan-tsary sy sary misy atiny mahomby.Ny fanampiana an'i Dolby dia manome anao mazava kokoa. Ny motera neural core 16 dia ahafahana mianatra milina haingana 70%.
2. Rafitra fakantsary Pro
Ny iPhone 12 Pro dia manohy ny fironana amin'ny fametrahana fakan-tsary telo. Izy ireo dia manavao ny kalitaon'ny sary miaraka amin'ny sensor sensor.Izy ireo dia mety amin'ny sarinao maody alina. Apple koa dia nitondra ny haitao LiDAR ao amin'ny rafitr'izy ireo.
Ny Optical Image Stabilization koa dia nanjary nahomby tokoa. Ny mason-tsivana mivelatra amin'ny singa fito dia manome anao fahamendrehana amin'ny sarinao rehetra.
Ny fampisehoana an'ity fitaovana ity dia mety amin'ny fampiasana maharitra. Na iza na iza dia afaka mampiasa azy io amin'ny alim-pandihizana sy ny streaming mivantana. Ny fampisehoana SuperDR retina XDR dia mitondra dobo pixel tsy manam-petra anao. Ny nitsika 1200 amin'ity fisehoana ity dia zava-dehibe amin'ny fampiasana mora foana mandritra ny andro sy ny alina.
Ny tahan'ny fifanoherana dia maha-mora ampiasaina ihany koa. Ny pikselana 3,4 tapitrisa amin'ity finday ity dia mahatonga azy io ho kandidà tonga lafatra amin'ny asanao miorina amin'ny sary.
iPhone 12 Pro dia miaraka amin'ny haitao farany Turbocharger ao amin'ny fitaovany. Mety raha ampiasaina eny am-pandehanana. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo bateria iray tontolo andro amin'ny vidiny tokana. Amin'ny alàlan'ilay fitaovana dia azonao atao ny mameno ny findainao ao anatin'ny minitra vitsy. Ny teknolojia MagSafe vaovao dia mampifanaraka azy ho azy amin'ny telefaona. Izy io koa dia manohana ny famandrihana tsy misy tariby miaraka amin'ny fanampian'ny vera indray.
Ireto ny sasany amin'ireo fisongadinana premium izay atolotray ny mpamaky anay rehetra mba hanandrana. Manantena izahay fa afaka manana traikefa mahafinaritra amin'ny fividiananao.
Modely iPhone 12 Pro:
Fotoana izao hijerena ireo maodely samihafa atolotry ny iPhone 12 Pro ho an'ny mpamaky antsika rehetra. Afaka manaraka an'ity torolàlana ity ny mpampiasa hahafantatra bebe kokoa momba ireo fitaovana.
Ny A2341 dia misy amin'ny faritra voafetra. Io no maodely amerikana miaraka amin'ireo tarika spectrum 5G izay manolotra Internet haingam-pandeha. Misy fahasamihafana ihany koa amin'ny famolavolana fototra. Ireo mpampiasa dia hahita tarika hita amin'ny iPhone, izay manonitra ny teknolojia. Antenna tsotra izay manampy anao hivoaka. Ny fitaovana dia manohana endri-javatra roa sim ho azy ho an'ny mpamaky ihany koa.
Izy io dia mitondra anao kalitao amin'ny Internet sy fandraisana haingana dia haingana.Io no maodely tonga lafatra ho an'izay rehetra maniry ny hafainganana.
Any amin'ny faritra vitsivitsy ihany no misy ilay kinova. Hivarotra izany any amin'ny faritra toa an'i Canada sy Japon. Ireo fiasa dia mijanona amin'ny ankapobeny. Ny olona sasany dia tsy hahazo ny endri-javatra 5G amin'ity fitaovana ity.Ireo mpampiasa dia afaka mahazo hafainganam-pandeha mahavariana amin'ny tamba-jotra 4G.
Manoro hevitra anao izahay mba hankafizanao an'ity serivisy ity ho an'ny fampiasa premium. Ny kinova dia manohana endri-javatra sim roa amin'ny fitaovany ihany koa. Andramo anio ary andramo ny serivisy kalitao.
Ny maodely A2407 dia tena ilaina amin'ny mpamaky izay te-hanana izany na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Io no ho lasa kinova manerantany an'ny iPhone amin'ity taona ity. Ho azo jerena amin'ny tsena lehibe toa an'i Eropa sy Azia izy io. Ny maodely dia manohana ihany koa ny fiasa sim roa miaraka amin'ny fanahafana mitovy amin'izany.
Ny toetra mampiavaka ny fitaovana dia mijanona ho iray ihany. Na izany aza, mety manana olana vitsivitsy amin'ireo mpampiasa 5G amin'ny firenena samihafa ireo mpampiasa. Teknolojia izay mbola miasa amin'ny ankamaroan'ireny faritra ireny.
Ny kinova A2408 no tendrony amin'ny fampiasanao maharitra. Mety ho an'ny mpamaky antsika rehetra avy any Hong Kong sy Sina izany. Io dia kinova voafetra izay tsy misy amin'ireo faritra ara-jeografika ireo ihany. Azonao atao ny mampiasa ny ankamaroan'ny endri-javatra tsy misy famerana.Ny fiantsoana fotoana mialoha sy WiFi dia tsy misy any amin'ny faritany sinoa. Mipoitra ihany koa eo amin'ny tsenan'i Macao amin'ity taona ity.
Io no maodely tokana misy fanohanana karatra sim ara-batana roa.Ireto ny safidy efatra izay ho azontsika rehetra amin'ny Internet amin'ny faritra samihafa.
Ahoana no hividianana?
Azonao atao ny mividy mora ny iPhone 12 Pro amin'ny magazay Apple akaiky anao indrindra. Tsy malaza eny an-tsena izany amin'ny alàlan'ny fomba samihafa ankehitriny.Ny maody an-tserasera no mijanona ho andiany be mpitady indrindra amin'izao andro izao.
Amin'ity torolàlana ity dia mandrakotra lafin-javatra samihafa amin'ny maodely iPhone 12 Pro izahay. Ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ity fitaovana ity hahazoana antoka fa mahazo traikefa tsara izy ireo. Manoro hevitra ny mpamakinay izahay mba hahazo ny fampahalalana rehetra ilaina alohan'ny fividianana. Ankafizo ny traikefa Apple fampiasa.
lalao roblox maimaim-poana hilalao
afaka mahazo tv antsamotady ao amin'ny ps4 ve aho
fampidinana tsy voasakana minecraft any am-pianarana
Amazon mpianatra ambaratonga ambony indrindra vidiny
safidy tsara indrindra hanoloana tariby